# 1 Isoftware Yokubuyisela Idatha ku-Windows naku-Mac - Studio Studio
Idatha yokubuyiselwa kwedatha ye-AndroidKit
Thenga iMac Thenga i-Win
The Umsindisi weDatha Ohamba phambili Okokwamadivayisi Wakho we-Android.
# 1 Izinga lempumelelo lamafayela we-Android alulama embonini.
Phinda Ubuye Izithombe, Oxhumana Nabo, Imilayezo, Izingcingo Zokushayela, Amavidiyo nokuningi.
Phinda Uthole Idatha ye-Android yamaphutha we-OS, Ukususa, Iphutha le-Rooting, Iphutha leKhadi le-SD nokuningi.
Phinda uthole imininingwane kusuka Kumemori Yangaphakathi, Ikhadi le-SD ne-Broken Samsung Android Ucingo.
Sekela cishe wonke amadivayisi we-Android.
Kulula ukuyisebenzisa ngesibonisi esibonakalayo.
Sekela i-Android 10.
Gcina Idatha Yakho Ebaluleke Kunoma iyiphi Inhlekelele
Akunandaba idatha yakho ye-Android ilahlekile. IdathaKit ingakutholela yona.
Kunezizathu eziningi kakhulu ezidala idatha elahlekile kudivayisi ye-Android. Akunandaba. Ukubuyiselwa Kwemininingwane Yethu kwe-Android kusekela ukubhekana nezimo eziningi. Ake sibheke kulezi zimo esingasiza ngazo ukubuyisa idatha kumadivayisi wakho we-android.
Ukukhishwa Kwekhadi le-SD
Ukulinyazwa kwe-ROM Kulimele
Ongakwazi Thola ku-Android Idivayisi
Vele uxhume idivaysi yakho ye-PC ku-PC nge-DataKit Android Data Recovery efakiwe, ungskena uphinde ululame zonke izinhlobo zefayela ufuna ukubuyisa, okufaka:
Buyisela Izingxoxo ze-WhatsApp nokunamathiselwe ku-Android yakho
Idatha yeDathaKit ye-Android ikuvumela ukuthi uphinde uthole yonke iMiyalezo ye-WhatsApp elahlekile nokunamathiselwe ku-Android yakho ngokushesha. AKEKHO Umsuka odingekayo! Chofoza ukuze ufunde kabanzi.
Izinamathiseli ungalulama ngeDathaKit Android Revenue:
Amavidiyo, Izithombe, Imilayezo Yezwi, Izitika, Imibhalo.
Indlela Phinda Uthole Idatha Esusiwe ku-Android?
Izinyathelo ezi-3 ezilula zokubuyisa idatha kusuka kwifoni ye-Android.
Isinyathelo 1. Qalisa Ukubuyiselwa kwedatha ye-Android ku-PC xhuma ifoni yakho kwi-PC.
Isinyathelo 2. Khetha ukuthi yini ongakuhlola.
Isinyathelo 3. Buka kuqala bese ukhetha idatha oyidingayo, bese uchofoza Ukubuyisa ukuthola imininingwane yakho emuva.
Kungani i-DataKit Android Data Revenue?
Iminyaka eyi-17 Isipiliyoni, Izigidi ezingama-20+ Amakhasimende emhlabeni wonke, I-100% Iphephile, Ukuxhaswa Kwezobuchwepheshe kwamahhala.
Kutholakale i-99% yazo zonke isithombe kusuka ku-Samsung
“Ngiphatheke kabi lapho ngilahlekelwa yizithombe zami ngesikhathi ngizidlulisela ku-Samsung Note 11 yami kwithebhulethi yami ngesikhathi sohambo olude nasekhaya. Bengazi ukuthi kungenzeka ukuthi balahlekile unomphela noma kufanele bakhokhe imali eningi esithombeni sangakini noma esitolo sezogesi ukuze sibabuyisele.
Ekugcineni ngagxumela kulokhu futhi ngakuzama ngaso leso sikhathi. Ngesikhathi ifakwa futhi zonke izithombe, ngisho nalezo ezisuswe kudala zatholakala! Ngiyajabula ukuthola lolu hlelo. ”
---- NguMichelle Swift.
Amafayili Alahlekile Atholakele!
“Imithwalo ilula kalula futhi yenza lokho ekushoyo kuyayenza.
Ngilahlekelwe yinqwaba yamafayela ku-Huawei Mate 10 yami futhi lolu hlelo lwangitholela lona. ”
---- Ngu-Ali J.
Kusebenze kahle ngesiqondisi nemiyalo!
“Lolu hlelo lungisebenzele kahle. Benginenkinga encane yokuxhuma nokubuyisa izithombe zami namavidiyo, kepha ngithinte usizo lwamakhasimende futhi abuyela kimi (ngokushesha kunokuqagelwa) nge-imeyili enemiyalo enemininingwane eminingi.
Uma udinga ukulungiswa okusheshayo futhi awuzange uwasuse amafayela kudala, i-DataKit kufanele ikusebenzele kahle. ”
Ngeke ungahambi kahle ngalolu hlelo!
“I-Android yami ibiphansi futhi ayivulanga.
Bengifuna wonke amafayela wokuqopha umsindo emuva futhi lolu hlelo lwenze umsebenzi! ”
---- Ngu-Aiden McDonough
Zama Ukubuyiselwa kwedatha ye-Android MAHHALA!
Yenza impilo yakho ye-Android ibe ngcono.
Phinda Uthumele Imilayezo elahlekile, Izithombe, Oxhumana nabo, Umlayezo we-WhatsApp nokuningi.
Win Landa Ukulanda i-Mac Thola Isilingo Samahhala nge-imeyili Yokulanda Kamuva Kukhompyutha
Ngaphandle Kwalokho Okulindele
Ukubuka kuqala kwamahhala ngaphambi kokhetho Lokubuyisela
Unganquma ukuthi uzobuyiselwa ini ngokubuka kwamahhala umphumela wokuskenwa.
Ihambisana ne-10000+ Ucingo lwe-Android namathebulethi
I-Samsung, i-Huawei, i-Oneplus, i-LG, i-Motorola, i-Sony, i-Google, i-Xiaomi, i-OPPO, i-ViVO, i-ZTE, njll.
Phinda uthole Idatha ye-Android kunoma yiziphi izimo
Isikrini esimnyama, singene kwimodi ye-Odin / Imodi yokubuyisa, Isikrini esaphukile, futhi namanzi alimele.
Imemori Yangaphakathi ne-SD / TF Ukubuyiselwa Kwekhadi
Ukuskena okusheshayo noma okujulile ukuskena idatha kusuka kwimemori yakho yangaphakathi ye-Android, ikhadi le-SD / TF, ne-SIM Card.
Ungayithola Kanjani Idatha Eyisusiwe Kwimemori Yangaphakathi ye-Android
Ayikho i-Bin Recycle Bin? - Ungabuyisa Kanjani Amafayili Ayisusiwe kusuka ku-Android
Ungawabuyisa Kanjani Amafayili kusuka ku-Android SD Card - Ikhadi Le-SD Card Lokubuyisela i-Android
Phinda uthinte oxhumana naye osuselwe kufoni ye-Android - Ukubuyiselwa kwe-Android Imininingwane
Phinda uvuse amavidiyo asusiwe ku-Android - Ukubuyiselwa kwevidiyo ye-Android
Ungabuyisa Kanjani Oxhumana Nabo kusuka ku-Android Sim Card
Ungawaphinde uwenze kanjani amafayela we-Audio asusiwe kusuka kufoni ye-Android - Ukubuyiswa kwe-Audio Audio
Phinda Ubuye Ususe Izithombe kusuka ku-Android - I-Android Photo Recovery
Ungasusa Kanjani Umlando Wokushaya Ucingo ku-iPhone Nefoni ye-Android
Phinda Ubuye Ususe Imilayezo Ye-Android - Ukubuyiselwa Kwe-SMS ye-Android
Phinda Ubuye Ususe Amafayela kufoni ye-Android - Ukubuyiselwa Kwefoni kwe-Android
Phinda Ubuye Ususe Umlando Wekholi ku-Android - Ukubuyiselwa Umlando Wekholi ye-Android
Lungisa Inkinobho Ye-Android ayisebenzi (Amandla, ivolumu, Ikhaya, Emuva Nemenyu)
Okuhle Kakhulu Ukubuyiselwa Kwemininingwane Ye-Android ku-dr.fone ye-Android
Phinda Uthole Imilayezo Ye-WhatsApp kusuka kwifoni ye-Android - Ukubuyisela Umlayezo We-WhatsApp
Iyahambisana Cishe Zonke Izingcingo ze-Android
Amakhasimende Ethu Ayalanda
Backup Idatha yefoni ye-Android kwikhompyutha (iWindows ne-Mac)
Khipha othintana naye, i-sms, isithombe, irekhodi lwamakholi, ividiyo, umsindo, i-whatsapp, idokhumenti kusuka ku-Broken Samsung eliphezulu bese ulungisa amaphutha wefoni ngokuchofoza.
Ukudluliselwa kwedatha ye-Android
Dlulisa idatha ye-Android Ucingo phakathi kweDivaysi ye-Android neKhompyutha